Ny tsenantsika manerantany
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-24
Ny vokarinay dia amidy any Etazonia, Canada, Australia, Malaysia, Japan, United Kingdom, New Zealand ary firenena maro hafa. Mba hahafahana manompo tsara kokoa ny tsena isam-paritra, nanangana trano fanatobiana entana 6 lehibe any ivelany izahay, ivon-toerana fikarohana sy fampandrosoana ary cent centre ...
Fampidirana ny ekipanay matihanina
Manana ekipa R&D matihanina izahay. Ny R&D sy ny toha-pamokarana dia manarona faritra manodidina ny 10,0000 metatra toradroa. Manome radiatera fiara novaina izahay miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta ary namokatra vokatra vaovao mihoatra ny 500. Misy maodely maivana 700 mahery amin'ny radiator fiara ary maro hafa ...
Automekanika Istanbul 2020
Ny Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. dia nanatrika ny fanontana farany an'ny Automekanika, foara manan-danja indrindra ho an'ny indostrian'ny fiara, izay natao tamin'ny volana novambra tany Shanghai. Ny orinasanay dia miasa hatramin'ny 2011 mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa amin'ny kalitaon'ny ...